Kubulawe intombazane (14) eNanda Dam | News24
LAST UPDATED: 2017-12-11, 18:23
Kubulawe intombazane (14) eNanda Dam
AMAPHOYISA ase-Hillcrest anxusa umpahakathi ukuba uwalekelele ecaleni lokutholaka kwengane yentombazane eneminyaka eyi-14 ubudala ibulewe ngoLwesibili mhla ka-6 kuMfumfu (October) ngezithuba zawo-9 ekuseni. Okhulumela amaphoyisa ase-Hillcrest ngaphansi koMnyango wekuXhumana uthe ulungu lomndeni walowo obulewe lafika emaphoyiseni ase-Hillcrest lizobika ngokuduka kwengane yalo uZothile Zesuliwe Nxumalo. “Amaphoyisa avula icala lokuduka ladluliselwa kuba seshi base-Hillcrest. Uphenyo lwecala lwaqala ngokuphazima kweso kwathi isithombe salowo odukile sadluliselwa kwezinye iziteshi zamaphoyisa nabezindaba. Ithimba le-search and rescue lacelwa ukuba lingenelele kuleli cala, lokufunwa kwentombazane.
UZolile wabhekwa eNanda Dam lapho okwathiwa wagcina ukubonwa khona ngaphambi kokuba aduke.
Ngesikhathi bemubheka eNanda Dam kwatholaka izingubo zakhe eduze kwedamu, okwaqinisekiswa ukuthi zazi gqokwe nguye ngosuku aduka ngalo.
NgoLwesihlanu mhla ka-9 kuMfumfu ngezithuba zawo-10 ekuseni amalungu amaphoyisa ase-Hillcrest, nabe-Search and Rescue kanye namalungu omphakathi balibangise edamini ukuyobheka ukuthi bangamuthola yini uZothile.
Ngesikhathi bese damini uMnuz Nathaniel Gumede ubike ngephunga elingajwayelekile ngaphandle kwase ndlini encane yase mzini wakhe. Amaphoyisa abe eselibangisa kuyo leyo ndawo bathola umzimba kaZothile ufihlwe kubheseni wase ndlini encane. Amaphoyisa avule icala lokubulala esiteshini sase-Hillcrest. Uphenyo lusaqhubeka kodwa akekho osaboshiwe mayilana nokuthinteka kuleli cala. Uma kukhona onolwazi noma iminingwane ngaleli cala angaxhumana nomseshi uDetective Constable Buthelezi enombolweni ethi: 072 570 3840 noma ethi: 031 765 9134